नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सुबिधाहरु अत्यन्तै सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनेछौं – इ – डायरी एक्सप्रेस
राजेश्वर अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, कामनपा ३, काठमाडौं
वि.स. २०२९ साल जेठ १९ गते महाराजगञ्ज काठमाडौंमा बाबु माधवराज अधिकारी र आमा अल्का देवी अधिकारीको सन्तानका रुपमा जन्मनुभएका राजेश्वर अधिकारी काठमाडौं महानगरपालिका –३ बाट वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ । कानूनमा स्नातक अध्ययन पुरा गर्नुभएका अधिकारी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको हो । अधिकारी वि.स.२०४५ साल माघ देखि नै सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो । नेविसंघ वडा अध्यक्ष, वि.स.२०४५, नेबिसंघ केन्द्रीय सदस्य, वि.स.२०५३, संगठित सदस्य नेपाल तरुण दल, वि.स.२०५८, नेपाली कांग्रेसको १२औंै महाधिवेशनबाट कामनपा–३ नं. वडाका निर्वाचित सभापति, १३औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, १४औ महाधिवेशनमा क्षत्रिय सभापतिको प्रत्यासी भएर सक्रिय रहँदै आउनुभयो ।
उपाध्यक्ष, मध्यामाञ्चल क्षत्रिय खेलकूद विकास समिति, २०७३, केन्द्रीय सदस्य नेपाल कराते महासंघ तथा प्रवक्ता २०६८/०६९, सल्लाहकार, वि.स. २०७२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सल्लाहकार बन्नुभयो । लामो समय काठमाडौंमै रहेर राजनीतिमार्फत समाजसेवा गर्दै आउनुभएका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिकारीसँग अति व्यस्तताका वावजुद डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका तर्फबाट नारायण प्रसाद शर्माले गरेको विशेष वार्ताः
० तपाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर तीनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईको जितका आधारहरु के के छन् ?
म यहि जन्मेर हुर्केको मानिस हुँ । हामी बिसौं पुस्ता देखि यहि नै बस्दै आएका हौं । हाम्रा वंशज र पिता पुर्खाहरु देखि मैले पनि गरेका सामाजिक कर्महरु, यहाँका मतदातासँगको मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध, यहाँका नागरिकबीचको समन्वय गरी हाम्रा एजेण्डाहरु लिएर आउँदैछौं । हाम्रा एजेण्डा र समन्वय नै जितका आधारहरु हुन् ।
० काठमाडौंका सभ्रान्त मानिसहरु बसोबास गर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पुरानै तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेका उम्मेदवार पनि तपाईको प्रतिस्पर्धामा छन् । जित तपाईकै पक्षमा हुन्छ भन्ने कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
उहाँको बारेमा मेरो कुनै गुनासो छैन । तर, यो वडालाई आक्रान्त पारिएको छ । विकास निर्माणका विषयमा पछाडि पारिएको छ । नागरिकलाई दिने सेवा दिग्दार लाग्दो छ । पञ्चायतकालिन सुब्बाहरुले चलाएको वडा र अहिले जनप्रतिनिधिले चलाएको वडामा अन्तर छैन । त्यसकारण यो वडा संविधानतः अपमानित भएको छ । यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री सुशलि कोइरालाले देहत्याग गरेको ठाउँ हो । साथै सम्मानित नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यहि क्षेत्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दा उठाउनुभएको थियो । त्यसैले हामीले नागरिकलाई सरकारसँग सिधै कसरी जोड्न सकिन्छ ? भन्ने सोच बनाएर काम गणतन्त्रको यात्रामा यहाँसम्म आइपुगेका छौं । यहाँका जनताले लामो समय देखि अपमान खेपिरहेका छन् । त्यसलाई सम्मानमा बदल्न पनि नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारसँग सेवाको महसुस गर्ने अवस्था बनाउनुपर्दछ । त्यसकारण एउटा कुनै अपराधीले कुनै अपराध दोहो¥याएर गरेको खण्डमा पटकेमा दण्ड दिइन्छ । यसपटक स्थानीय जनताले सत्य तथ्य छुट्टाउने छन् ।
० यो वडामा सुधारका निमित्त के कस्ता कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ ?
यो वडामा धेरै समस्याहरु छन् । महानगर जर्जर अवस्थामा छ । महानगरमा जुन सभ्यता छ, यहाँका रितिरिवाज, लिच्छिवीकालिन सभ्यताहरु, धर्म संस्कृति, परम्परा, गुठी जस्ता संस्कृतिहरुबाट यहाँको समाज बनेको छ, त्यो समाजको समग्र विकासमा म लाग्नेछु । मैले सबैभन्दा पहिला जन्म देखि मृत्युसम्म सिफारिसका लागि गरिने सेवा प्रवाहहरु, आफुले प्राप्त गरेका अधिकारहरु, सम्पत्ति हकको हस्तान्तरण जस्ता कामका लागि गरिने अनेक झन्झटहरुको अन्त्य गरिने छ । ति आधारभूत कुराहरुको सुधारबाट नै मैले काम थाल्नेछु । अनलाइनको माध्यमबाट सिफारिसका लागि दरखास्त फाराम भर्न सकिने छ । राजस्वहरु पनि अनलाइनबाटै बुझाएर नगर प्रहरी, वडाका कर्मचारी वा हामी जनप्रतिनिधिहरु नै घर घरमा पुगेर सिफारिस उपलव्ध गराउँने छौं । यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहँने छ । त्यसै गरी वडामा वृद्धा वृद्धाहरु, बालकहरु, सुत्केरी महिलाहरु, अपांगहरु, तेस्रो लिंगी, अल्पसंख्यकहरु नागरिकमैत्री बनाएर विकास निर्माणको काममा थालनी गरिनेछ । त्यसको साथ–साथै नागरिकलाई राज्यले प्रदान गरेका सुबिधाहरु अत्यन्तै सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनेछौं । मठ मन्दिरहरुको संरक्षण र यहाँको फोहोरको व्यवस्थापनएकदमै समसयाका रुपमा छन् । हामीले यहाँको फोहोरलाई जनताको खुत्रुकेमा मोहोर बनाउनेछौं । हाम्रा कार्यक्रममा पनि यो विषय उल्लेख गरेका छौं । फोहोर संकलक मित्रहरुलाई हामीले तिरेको करको कोषबाटै व्यवस्था गर्नेछौं । युवाहरुलाई खेलकुदका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएर खेलकुदको विकासमा लागि पर्नेछौ । सामाजिक रुपमा दूव्यसनी र अपराधिक घट्नाहरु पनि घटिरहेका छन् । यसका लागि दूव्यसनिमुक्त समाजको निर्माण गर्नेछौं । यसरी अपराधमुक्त समाजको निर्माण गरी सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने गरी मेरो नेतृत्वमा बनेको वडा सरकारले यि समस्याको हल गर्नेछ ।
० यो वडामा टियु टिचिङ अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल र गंगालाल हृदय रोक केन्द्र जस्ता देशकै ठूला सरकारी अस्पतालहरु पनि छन् । स्थानीयहरुको पहुँच स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याउनका लागि तपाईको के पहल हुन्छ ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर तीनमा राणाकालिन प्रधानमन्त्रीहरु पनि यहि बसेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बासस्थान पनि यहि छ । राष्ट्रपति कार्यालय पनि यहि वडामा पर्दछ । साथै १७/१८ वटा अस्पताल र १२/१३ वटा राजदुतावास छन् । यी मध्ये गंगालाल अस्पताल, कान्तिबाल अस्पताल र टियुटिचिङ अस्पतालमा यहाँका स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण भएका हुन् । रोपनीका मालिकहरु राज्यले अधिग्रहण गरेपछि दुई तीन आनामा सिमित हुनुभयो । तर, उहाँहरुलाई रोग लागेर बिरामी पर्दा आफुले सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचारका लागि जानु परेको छ । जसको जग्गा अधिकरण गरेर त्यो परिवारलाई बिस्थापित गरियो, तिनीहरुका लागि राज्यले निशुल्क सिटकोे व्यवस्था गर्नुपर्दैन र ? राज्यले नै नागरिकलाई अपहेलित गरेका कारण पञ्चायती व्यवस्था फालेको होइनौं ? संवैधानिक राजतन्त्र भित्रै पनि राजाले नागरिकका अधिकारहरु सधै डिक्टेक गर्न लागे भनेर गणतन्त्र ल्याएको होइन ? गणतन्त्र ल्याएपछि बनेको संविधानमा हाम्रो संविधानको अनुसूचि ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । त्यसैमा रहेर स्थानीय तहका सरकारले जनताको पक्षमा कामहरु गर्न सकिन्थ्यो । तर, बिभिन्न खालका बहानाबाजी भूकम्प र कोरोना भाइरसको कुराहरु ल्याएर पन्छिने छुट स्थानीय सरकारलाई छँदैछैन । त्यसका लागि आगामि दिनमा हिजो गरेका गल्ति कमजोरीमा हामीले नै जनतासामु माफी माग्दै कसरी जनताका लागि सहज बनाउने भन्ने विषयमा अस्पताल व्यवस्थापनसँग कुरा गर्ने नै छौं । स्थानीयहरुलाई शिक्षामा पनि कसरी निशुल्क गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि हामलिे पारदर्शी सरकार बनाउनेछौं । त्यसका लागि प्रत्येक तीन तीन महिनामा हामीले आयव्ययको विवरण इलेक्ट्रिक डिस्प्ले मार्फत सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्ना मोबाइलमार्फत नै सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्नेछन् । नागरिकले आफनो सरकार भनेर गर्व गर्न लायक सरकार बनाउनेछौं । अहिले हाम्रो वडामा नेकपा माओवादी केन्द्रलेसमेत चुनाव चिन्ह रुख नै लिएर गठबन्धनको नमुना नै बनेको छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन शान्ति सम्झौता गरेका थिए, त्यसको मसी सुक्न नदिने काम पनि हाम्रो वडाले गर्नेछ । देशकै राजनीतिक समस्याहरु द्वन्द्वपीडितका समस्याहरु, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विषयहरु पनि स्थानीय सरकारबाटै आवाज उठाउनका लागि हाम्रो गठबन्धन नै बनेको छ । यसरी विकास निर्माणमा पनि संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने आम नागरिकलाई महसुस दिलाइने छ । हाम्रा स्थानीयबासी, गुठी, मठ मन्दिर र आम लोकतन्त्रबादी सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौं ।
० नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय तहको सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यस वडामा भएका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरु केहि हदसम्म त संरक्षित नै छन् । तथापि सरकारको कुनैपनि उपस्थिति पाएका छैनौं । यहाँबाट सञ्चालित एफएम, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि गुटगत रुपमा मेरो र तेरो भन्ने पक्षपातपूर्ण काम गरेको सुनेका छौं । त्यसकारण कतिपय संघ संस्थाहरु पनि उपेक्षित छन् । यसरी कतिपय संस्थाहरुले सार्वजनिक जग्गाहरु संरक्षण गरेर राखेका छन् । यदि उनीहरुले पहल नगरेको भए, त्यो जग्गा बिभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको हुन्थ्यो । उहाँहरुले संरक्षण गरेर राखेको जमिन हामीले सिघार्ने छौं र साथै समाजको गहनाको रुपमा स्थापित गर्नेछौं ।
० यसको अर्थ यो वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण छैन ?
कतिपय ठाउँमा नागरिकहरुले अतिक्रमण गरेर बसेको अवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार चुप लागेर बसेको छ । गलत टेण्डर गरेर यहाँको स्थानीय सरकारले नै पछिको ढोकाबाट रकम असुली गरी दूरुपयोग पनि गरेका थिए । ति सबै कुराहरुमा हामीले नागरिक स्तरबाटै खबरदारी गरी जनचेतना कार्यक्रम अघि ल्याएर अनाधिकृत रुपमा गरिएका गैर कानूनी कामलाई बदर गर्नेछौ ।
० यो वडामा बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा कतिपय मुआवजाका कुराहरु पनि जोडदारले उठेको थिए । जुन विषयमा तपाईको के मत रहन्छ ?
डा बाबुराम भट्टराई जो गठबन्धनकै नेता पनि हुनुुहन्छ, उहाँले काठमाडौंकै रैथानेहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति माथि हस्तक्षेप गरी डोजर चलाउनुभयो । उहाँले नागरिकको अधिकारलाई हनन् गरी कम्युनिस्ट सरकारले जनताको सम्पत्तिमा कसरी पेल्ने गर्छ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यो समयमा गरिएको कामको हामी खेद प्रकट गर्दछौ । बाटो विस्तारको नाममा जुन प्रकारले स्थानीय जनताको सम्पत्ति लुटिएको छ, ति जग्गाको हकमा जुन निर्धारित मापदण्डहरु छन् । तिनलाई कायम गरी आगामी दिनमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्गिकरण अनुसार जुन केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र परेका छन्, जो स्वस्फूर्तः रुपमा आफ्नो निजी सम्पत्ति राष्ट्रको विकासका लागि दान गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई हामीले सम्मान गर्न पाउनुपर्दछ । यो उहाँहरुको इच्छाले अघि बढाउँनुपर्दछ । त्यसका लागि हामी उहाँहरुसँग माफी माग्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं ।
० अन्तमा आगामी ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा यस वडाका मतदाताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यहाँका मतदाताको बिभिन्न किसिमका समस्याहरु छन् । सिफारिसका विषयहरु देखि लिएर वृद्धा वृद्धा र अपाङ्गहरुलाई राज्यकोषबाट उपलव्ध गराइने रकममा अझ थप र व्यवस्थित गर्नेछु । मैले प्राप्त गर्ने भत्तालाई पनि असी वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई महानगरपालिकाले प्रदान गरेको १२ हजार रुपैयामा थप गरी उपलव्ध गराउनेछु । ति आमा वुवाको आर्शिवादबाट मलाई रुख चिन्हमा मत दिएर लोकतन्त्रको समान गर्न १८ वर्ष पुगेको पहिलो मतदाताहरुलाई पनि आव्हान गर्दछु । आफ्नो मतको खेर जान नदिई तपाईहरुकै उम्मेदवार राजेश अधिकारीलाई मत दिन अनुरोध गर्दछु । हामीले गलत ठाउँमा मतदान गर्दा हामी धेरै ठाउँमा चुक्नुपरेको छ । त्यसैले हाम्रा बाबु र बाजेहरु यसरी नै बिते । तर, हामीलाई अवसर आएको छ । यो अवसरलाई दिक्क मान्ने खालको वातावरण नबनाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु । हाम्रो वडामा कतिपय ठाउँहरुमा डुबानका समस्याहरु पनि छन् । ति समस्याहरुलाई हामीले स्थानीय प्रदेश र कन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी हल गर्नेछौं । आगामी प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्वाचनमा बन्ने उम्मेदवारहरुलाई हामीले डुबान समस्याको समाधान गर्न एक खालको गुरुयोजना तयार गरी लागू गराउन प्रतिवद्धता जनाउन अनुरोध गर्नेछौं । न्युरो अस्पताल बाँसबारी देखि विष्णुमतिमा समाहित हुने खोलामा यहाँका साना खोलाहरु थुनेर हाम्रो वडा नै डुबानमा पर्दै आएको छ । ती डुबानमा परेका नागरिकहरुलाई कसरी हुन्छ, तटबन्ध बनाएर विकासकै नमुना अघि सार्नेछौं । हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई मतदाताहरुले सम्मान र आदारका साथ हेर्नुहुनेछ । म नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य नै वडाको उम्मेदवार भएको हुँदा भातृ संगठनहरु नेबिसंघ, तरुण दल र माओवादी केन्द्रका सम्पूर्ण युवाहरुको पनि साथ र सहयोग रहँने छ । यसरी हाम्रो मिसनलाई सफल बनाउनका लागि अत्याधिक मतले विजयी बनाउनुहुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु ।
Previous सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच तलबी बचत खाता तथा कर्जा सुविधा सम्झौता
Next अति नै हेपिएको नेपाल– भारत कुटनीति